Shaqada ayaa kusii socota aaladda MR ee Guriga Kowaad | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraShaqada ayaa kusii socota aaladda MR ee Guriga Kowaad
15 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
Shaqooyinku waxay sii socdaan aaladda mr ee ugu horreysa ee guriga
Wasiirka Warshadaha Difaaca Madaxweynaha. Dr. İsmail Demir wuxuu baaray aaladda MR ee maxalliga ah ee ugu horreysa oo tusmooyinkeeda ay soo saareen ASELSAN iyo Bilkent UMRAM. Isagoo bayaan ka bixinaya ku-biirinta wershadaha difaaca qaybta caafimaadka, ayuu Demir yiri, “ASELSAN waxay sii wadaa inay ka shaqeyso aaladda neefsashada ee macmalka ah, mashiinka sambabbada wadnaha, qalabka raajada guur-guura iyo aaladaha la-qaadi karo ee la qaadi karo marka laga reebo aaladda MR. Sidoo kale, sidii warshadaha difaaca, daraasadeena R&D ee daryeelka bukaanka, xirmada baarista, xogta iyo sawir qaadista ayaa sii socota. ”
Wasiirka Warshadaha Difaaca Madaxweynaha. Dr. İsmail Demir, oo uu weheliyo Gudoomiyaha Aselsan iyo Maareeyaha Guud Haluk Görgün, ayaa booqday Jaamacada Bilkent UMRAM (Xarunta Cilmi baarista Magnetic Resonance National Center). Reeraha Jaamacada Bilkent. Dr. Intii lagu guda jiray booqashada, oo ay kujiraan Abdullah Atalar, Madaxweyne Demir, oo helay macluumaad ku saabsan daraasadaha, wuxuu baaray aaladda MR gudaha, taasoo Aselsan iyo Bilkent UMRAM ay ku soo saareen tusaalaha ugu horreeya.
Madaxweynaha SSB Demir wuxuu warbixin ka bixiyay booqashadiisa iyo shaqada warshadaha difaaca ee teknoolojiyadda caafimaadka. Bayaanka birta, wuxuu yiri:
“Mashaariico kaladuwan ayaa socda marka loo eego adeegsiga dhowr teknolojiyad ah oo lagu soo saaray warshadaha difaaca. Iyada oo uu jiro masiibada, oo ajandaha maanta ku jirta, daraasado laga sameeyay waaxda caafimaadka ayaa soo baxay. Tusaalaha ugu horreeya ee tani waxay ahayd hordhaca neefsashada. Iyada oo la raacayo hoggaanka Wasaaradda Warshadaha iyo Tiknolojiyadda, mid ka mid ah shirkadahayada SME iyo laba shirkadood oo warshadaha difaaca ah ayaa isu yimid si ay u soo saaraan qalabka neefsashadaha, guushiisiina hadda waa la arkaa. Laakiin shaqadu intaas kaliya maaha. ”
Waxaa jiray 5 aaladood oo kale oo ay ASELSAN horeyba uga shaqeyneyso. Marka lagu daro aaladda MR, ASELSAN waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso qalabka neefsashada ee macmalka ah, mashiinka sambabbada wadnaha, aaladda raajada guur-guurta iyo mashiinka defibrillator-ka la qaadan karo. Mar labaad, baaxadda Hay'addeenna, waxay ka shaqeysaa horumarinta maaskaro iyo alaabada kale ee ku jirta daawada jeermiska ka hortaga.
Ka sokow, waxaa jira dhowr cinwaan oo ay horseedday warshadaha difaaca sida cinwaanka R&D. Bilowga kuwan, waxaan ka shaqeyneynaa horumarinta tikniyoolajiyadaha daryeelka bukaanka iyo kormeerka. Mar labaad, waxaa jira daraasad ku saabsan ogaanshaha bukaanka iyo sameynta xirmada qalabka. Dhanka kale, waxaa jira teknolojiyad lagu muujinayo xog-ururinta, farshaxanka muuqaalka, qaababkooda nidaamyo caqli iyo aqoon qoto dheer. Waa macquul in la yiraahdo kuwan waxaa lagu sii wadaa siyaabo badan.
Sababta oo ah teknolojiyada halkan lagu isticmaalay waxaa ka mid ah fulinta qaar ka mid ah teknolojiyadda aasaasiga ah ee lagu soo saaray warshadaha difaaca, iyo tikniyoolajiyadaha horumaray waxay saameyn toos ah ku leeyihiin difaaca. Waxaan aragnay goob aan ku abuuri karno shaqo iska kaashaneysa xagga difaaca labadaba xagga difaaca, dhibaatooyinka askarteenna, ciidamadeenna amniga, iyo qalabka elektarooniga ah, xog sameynta, sawir sameynta iyo farsamooyinka barnaamijyada looga bartay. Caafimaadka waxaa loo tixgelin karaa inay yihiin bilowga adeegyadan badan iyo arrimaha loo keenay ajandaha dadweynaha oo ka dhashay ajandaha hadda jira. Si kastaba ha noqotee, marka lagu daro tamarta, xarumaha kala duwan ee xasaasiga ah iyo shaqooyinka ilaalinta nidaamka, kormeerka iyo kantaroolka otomaatiga ah ee nidaamyada qaybinta kala duwan, nidaamyada isgaarsiinta iyo aagga amniga internetka, aagga isgaarsiinta, iyo adeegsiga badan ee teknolojiyadda qaybaha kala duwan, marka lagu daro xiriirinta qeybaha kala duwan ee gobolka. Shaqadayadu way socotaa.
“Ka sokow ASELSAN, oo ku darsata shantaan shey ee caafimaadka, waxaan arki doonnaa natiijooyinka shaqadeeda shirkadaha kale ee la xiriira nidaamyada softiweeryada iyo nidaamyada kala duwan ee macluumaadka iyo nidaamka sawir qaadista. Halkan, waxaan ku aragnaa ahmiyada mowduuca Dhaqdhaqaaqa Teknolojiyadda Qaranka ee ajendaha dalka iyo in la hubiyo isticmaalka badan ee teknolojiyad kasta oo laga sameeyay dalka iyo in la sameeyo horumar degdeg ah. Waxaan rajeynayaa inaan taas ku sii wadi doonno iskaashi dhow oo lala yeesho warshadaha kale, iyo sidoo kale waaxda difaaca. ”
“Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee tani waa isu keenista sayniska iyo tikniyoolajiyada, iyaga oo isla socodsiinaya oo meel marin doona arrintan. Dabcan, waad ogtahay guriga machadyada cilmi-baarista, jaamacadaha. Jaamacadda Bilkent UMRAM, oo aan hadda ku jirno, iyo xarumo cilmi-baaris oo kala duwan ayaa sidoo kale ka mid ah dhismayaasha aan si dhow isaga kaashanno. Dareenkaas, waxaan sii wadnaa inaan la shaqeyno jaamacado kala duwan. Markaa macluumaad iyo teknolojiyad ayaa imaan doonta. Waxaan sii wadnaa inaan maalgashi la sameyno mustaqbalkeena dhalinyarada. Waxaan rajeynayaa in warshadaha gaashaandhiga ay sii wadi doonaan dadaalka arintan. ”
Mashruuca YHT Istanbul ayaa socda
Kordhinta Nidaam-hoosaadka Aliaura-Menderes-İZBAN ilaa Torbalı…
Dadaallada sii kordhinta IZBAN ee Torbalı ayaa sii socota
3. Bridge iyo Waqooyiga Marmara ayaa sii wadaya inay shaqeeyaan
sambabka wadnaha sambabbada
qalabka 'X-Ray' ee mobilada
defibrillator la qaadan karo
Kdz. Ka shaqee wadada 46 ee wadada gaadiidka loo raaco Eregli